Mi account ဘာကြောင့် ရှိသင့်သလဲ.... « XMS-MMF
Mi account ဘာကြောင့် ရှိသင့်သလဲ....
TIN HTAY AG·MONDAY, MAY 2, 2016
Xiaomi device တွေကို အသုံးပြုပီဆိုရင်ဖြင့် mi account ဟာ အရေးပါတဲ့ အရာတခုပါ။ ဘာကြောင့်လိုမှာလဲ မေးခဲ့ရင်တော့.... ၁။ theme ကနေ အလွယ်တကူ မြန်မာဖောင့်(ဇော်ဂျီ)သုံးလို့ရပါတယ် root မလိုပါဘူး ၂။ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်း ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်ရှာဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ များပါတယ် ၃။ Mi Cloud 5gb အလကားပေးသုံးထားတာမို့ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေ၊ လိပ်စာတွေ၊ note၊ ဓာတ်ပုံတွေကို သိမ်းဆည်းထားလို့ရပါမယ် ၄။ အခုနောက်ပိုင်း miui 7.1 မှာ bootloader lock ဖြစ်လာတဲ့အတွက် မိမိအကောင့်ကို မမှတ်မိရင် အထဲကို အလွယ်တကူ ၀င်လို့မရတော့ပါဘူး..... ဒါကြောင့် mi account ဟာ အရေးပါတဲ့အခန်းက ဖြစ်လာပါတယ်.... အကောင့် ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ ? အလွယ်တကူပြောရရင်တော့ နိုင်ငံတကာမှာ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ ဖွင့်လို့ရပါတယ်..... ချွင်းချက်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ telecom ပေါ်မူတည်ပီး တချို့က ရတယ်၊ တချို့က မရပါဘူး... ဒီတော့ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်လို့မရရင် မိမိတို့ရဲ့ gmail နဲ့ အကောင့်လုပ်လို့ရပါတယ်..... အောက်မှာ လင့်ပေးထားပါတယ်... ဒီ့ကနေပီး အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်... Mi account ဖွင့်ရမယ့် လိပ်စာ… https://account.xiaomi.com/pass/register
အခုပေးထားတဲ့လင့်ကို ၀င်ပါ.. ဖုန်းနဲ့အဆင်မပြေရင် ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ်.. မိမိတို့ မေးလ်ထဲကို activate လုပ်ဖို့ လင့်ပို့လာခဲ့ရင် အဲ့ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ အကောင့်သစ်ရပါပီ.... တချို့ကကျတော့လည်း အကောင့်လုပ်ပီး pw မပေးမိတာတို့ တခြားအကြောင်းတို့ကြောင့်များ မေ့တတ်ခဲ့ရင်တော့ အောက်က လင့်ကိုဝင်ပီး pw ကို reset လုပ်လို့ရပါတယ်.. မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးမဲ့လင့်ကနေတဆင့် ၀င်ပီး pw reset လုပ်နိုင်ပါတယ်... မေ့တတ်သူများအတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်ဗျ... MI acc reset pw link…. https://account.xiaomi.com/pass/forgetPassword
မိမိတို့ mi အကောင့်ကို လုံးဝမသုံးချင်လို့ ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်လို့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့် မဖျက်ခင်မှာ အောက်က ရေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်ပီးမှ ဖျက်ပါ.... မဟုတ်ရင်တော့ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့ပါလိမ့်မယ်.... How to Delete Mi account permanent.. .. 1. Order history on mi.com
Kindly follow below instructions to delete your Mi account:
3. After that you need to pass through the verification page: phone number or email 4. Continue to click "delete Mi account" and the whole process will be finished အဆင်ပြေကြပါစေ….
Tout Pi 10:27:00 AM